NYI LYNN SECK 18+ DEN: How to Install Zawgyi Unicode Keyboard
Wednesday, June 7, 2006
How to Install Zawgyi Unicode Keyboard
ဇှောဂျီ ယူနီကုဒ် ဖြင့် မြန်မာစာ ရိုက်ရန်
ပထမဆုံး ဇှောဂျီ လက်ကွက်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး အင်စတောလ် လုပ်ပါ။ [Link]။ စက်ထဲတွင် အခြား မြန်မာ ယူနီကုဒ် အမျိုးအစားများ မရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။ ရှိနေခဲ့ရင် Uninstall လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဇှောဂျီ အင်စတောလ် လုပ်ပြီးလျှင်-
1. Control Panel > Regional and Language ကိုသွားပါ။
2. Regional Language Box မှ Language ဆိုသော ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပါ
3. Language > Detail ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ Box ထဲမှာ Default Input Language ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို စစ်ဆေးပါ။ ဇှောဂျီ ကီးဘုတ်ကို မြင်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အောက်ဆုံးက -
4. Preference > Language Bar ကိုသွားပါ။
5. Desktop မှာ Keyboard အလွယ်တကူ ချိန်းနိုင်ရန် အဆိုပါ ဗောက်စ်ထဲမှ အကွက် လေးများကို Check လုပ်ပေးပါ။
6. OK နှိပ်ပါ။
အဲဒီအခါ ဝင်းဒိုးစ်ရဲ့ အောက်ညာဘက် နာရီအချိန် ပြတဲ့ နေရာမှာ ကီးဘုတ်ပုံလေး ပှေါလာပါလိမ့်မယ်။
7. မြန်မာ စာသားကို ရိုက်လိုတဲ့အခါ Clt+Shift ကိုနှိပ်ရပါမယ် (ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ဝဘ်ပေ့ခ်ျ များတွင်သာ သုံးနိုင်သည်)။ အဂဿငလိပ်စာကို ရိုက်လိုလျှင် အဆိုပါ Clt+Shift ကို ထပ်နှိပ် ပေးရပါမည်။
မှတ်ချက် - ဇှောဂျီ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်သည် ဖိုင်းယားဖောက်စ် 1.0.5.1 ဖြင့်သာ အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဖောင့် မသွင်းတတ်သူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
[ Zawgyi Font Installation ]
Tags: Myanmar Unicode, Zawgyi Unicode
Posted by NLS at 6/07/2006 09:57:00 AM
No response to “How to Install Zawgyi Unicode Keyboard”
Design 2006 Awards
World Cup Fixture (fake)
If I were famous ads would be like that!
International Color Awards
Email Fmail Gmail!
Song For Sale# ယုံပါ
Mogu & Eros
For Sale #1
Min Khaik Soe San
Myanmar Ebooks Download
Tree Spirit Project
Photo Realistic Rendering
Mercantile Marine Cadet ဘဝ (၂)
အိပ်ပျှောစေသော နည်းစနစ် ၁၂ ချက်
How to WriteaMaster's Thesis
Cute Icons for your Computer
Essential Tools For Blog
Mercantile Marine Cadet ဘဝ (၁)
Online Burmese Language Course
AFI's 100 Best of 100 Years
Very Meaningful Movie
Shock Absorber Bra
Jackson Pollock Abstract
Best Wallpaper for this week
Amazing Seamless Pictures
Gmail and Gtalk
My IPod Design
World Cup Banner for Brazil
No U Turn
Infront of the Hotel of Mcleod Ganj
Meebo All in One Messenger
Myanmar Bloggers Graffiti Board
ဂူဂယ်လ်အတ်က မြန်မာပြည် မြေပုံအသစ်များ
Myanmar Bloggers Community
How to make Glossy Buttons
Google Browser Sync
Lady Pod Media Player
Searching Music Safely
Website as Graph
The 100 Best Products of the Year
Blog Catagories ခွဲခြားခြင်း
လူဟာ မျောက်မဟုတ်သလို မျောက်တွေက လူမဟုတ်ဘူး
Myanmar Keyboard Layouts
Sony Vaio VGN-UX50
RAKHITA MYANMAR MUSIC
Window Media Player 11